Fitsaboana ny fararian'ny taolana...
Naseho ny : 23 janoary 2021
Ny sampana mitsabo ny fararian'ny taolana dia tafiditra amin'ny fitsaboana tsy mampiasa afatsy tanana. Ny tanana no hitsapana ary ny tanana ihany no hoentina mitsabo, tsy mampiasa menaka. Ny aretina azo tsaboina eo anivon'io sampana io dia izay rehetra mifandray amin'ny taolana : Ozatra, nofo, taova, taolan-damosina, andilana...
Naseho ny : 16 janoary 2021
Aretina mpahazo olona maro maneran-tany ny fahenoana feo ao anaty sofina izay tsy fandre, ny 10% ny olona any Japon sy Amerika no tratrany, 70% ny ao Frantsa, ary 15% ny eto Afrika. Ny antony mahatonga azy dia mety ho tai-tsofina, tafiditry ny zavatra, misy tsimok'aretina, maniry loatra ny taolan-tsofina, voadona mafy, avy amin'ny toerana be tabataba, fahanterana, vokatry ny tsy fahazakana fanafody. Misy karazany roa ny fitrangany : Ny marary ihany no maheno, ary ny iray ny mpitsabo ihany koa mahare ilay feo...
Ny fivontosana amin'ny Vehivavy bevohoka
Naseho ny : 9 janoary 2021
Tranga matetika miseho amin'ny vehivavy bevohoka ny fivontosana amin'ny faritra maro amin'ny vatana. Ny hafanana dia mandrisika kokoa ny fivontosana. Ny fivontosana miseho amin'ny vehivavy bevohoka dia noho ny fivontosan'ny elanelan'ny sela. Antony fototra mahatonga azy ny fiasan'ny tsirimpanentana, ny lalan-drà voatery, ny tosi-drà... Ny telo volana farany amin'ny vanim-potoana hitondrana vohoka no tena miseho ny fivontosana...
Naseho ny : 12 desambra 2020
Ny diabeta : tranga ahitana fa ambony ny fatran'ny siramamy amin'ny rà, raha miohatra amin'ny tokony ho izy, vokatry ny faharerahan'ny sarakaty, izay mahatonga ny fihenan'ny famokarana "insuline". Mety hananosarotra ho an'ireo vehivavy diabetika ny hahazo zanaka raha tsy voazaha sy harahi-maso tsara. Ireto fambara : ho an'ny latsaky ny 30 taona dia mipipy matetika, misotro rano lava, mihamahia, reraka be ; ny 40taona no miakatra kosa dia ny sarakaty no matetika tsy mamokatra insuline tsara intsony. Eran-tany dia misy olona matin'ny diabeta isaky ny 7minitra...
Pejy 15 amin'ny 17